Georgia inokunda: UNWTO inosarudza Zurab Pololikashvili semunyori mukuru. Nhau dzakanaka kana dzakaipa dzekushanya kwenyika?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Georgia Kuputsa Nhau » Georgia inokunda: UNWTO inosarudza Zurab Pololikashvili semunyori mukuru. Nhau dzakanaka kana dzakaipa dzekushanya kwenyika?
Kuputsa Kufamba Nhau • Georgia Kuputsa Nhau • Spain Kuputsa Nhau • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now
ZVIMWE ZVAKAITIKA: Iri izuva rakanaka kana rakaipa kwazvo remangwana reWorld Tourism? Musasa mukuru unopinda Executive Council muMadrid kubva kuGeorgia zviri pachena wakave nezuva rakanaka muMadrid neChishanu kuMelia Castilla Hotel. Champaign yaiyerera.
Zurab Pololikashvili, mumiriri weUNWTO Secretary General kubva kuGeorgia akasarudzwa Chishanu masikati semunyori mukuru anotevera. Akagamuchira mavhoti gumi nemasere mukutenderera kwechipiri musarudzo yeMadrid Muchikamu chekutanga, Georgia yakawana mavhoti masere, Walter Mzembi anobva kuZimbabwe mavhoti gumi nerimwe. Korea yaive yechitatu nemavhoti masere.
Mumwe anogona chete kukorokotedza mutungamiriri weGeorgia nerutsigiro rwake. Mumiriri weGeorgia muMadrid akaratidzika kunge ari padivi panguva yemushandirapamwe wakasundwa nemusoro wenyika.
Mhedzisiro yesarudzo iyi inogona kunge yanga isiri mukwikwidzi akanakisa, asi nezvematongerwo enyika uye zvibvumirano zvekutsiva.
Mushure mekukunda kwake, Zurab Pololikashvili akaonekwa achipemberera nechikwata chake. Iye haana kuenda kumusangano wevatori venhau naTaleb Rifai mushure mesarudzo.Panga pasina ruzivo rwakaburitswa neGeorgia, kunyangwe chirevo chekutarisira kumberi kana kukutendai.
Munguva yaVaPololikashvili mushandirapamwe, pakange pasina kufambiswa kwenhau, uye mumiriri akange asipo pazviitiko zvepasi rese. Kune vazhinji vedu munhau, VaPololikashvili vanoramba vari munhu-mumwe.
Munyori mukuru-akasarudzwa, zvakadaro, akarondedzera meseji kune vese vakakwikwidza mushure mekugadzwa kwake kuburikidza naTaleb Rifai uye akazvipira kushanda navo mune ramangwana.
Plan B yevakakundwa musarudzo ichave yekupokana nesarudzo kuGeneral Assembly iri kuuya kuChina?
Pakadai 2/3 yenyika dzese dziri nhengo dzinofanirwa kusimbisa kurudziro yedare repamusoro.
Taleb Rifai akati pamusangano wekuvhara musangano neChishanu akaziva Zurab kwemakore mazhinji. Akamuti murume akanaka anokwanisa kuita basa iri. Akadudza ruzivo rwake sewaimbova gurukota rekushanya kuGeorgia. Akapedzisa achiti democracy yainge yataura.
Secretary general akataurawo. Paive nematanho maviri evhoti:
1) Hunhu, chiratidzo, uye ruzivo rwemumiriri.
2) Nyika iyo mumiriri anomiririra uye kumira kwayo pasi.
Rifai zvakare akatsanangura mushandirapamwe weveruzhinji wanga usiri madikanwa pasarudzo dzakadai.
Zvinotaridza kuti urwu rudzi rwe "democracy" runogona kudzorwa chaizvo nemashumiro ekunze kana vatungamiriri venyika uye kwete makurukota ezvekushanya kana vamiriri vevashanyi munyika zhinji dzinovhota.
Zvibvumirano zvezvematongerwo enyika zvinotemwa nemakurukota ekunze kana vatungamiriri venyika uye kazhinji hazvina hukama nekufamba uye kushanya.
Nhengo yedare remakurukota evhoti zvechokwadi haisi chete ine basa kune nyika yaro, asi kune dzimwe nyika ina. Iko kune 4 Executive nhengo yega yega mashanu eUNWTO nhengo dzenyika.
Munyori akanyarara uye akavhara UNWTO secretary general ane zvematongerwo enyika ajenda yenyika yake, uye kushoma kugona kutaura Chirungu kunogona kunge kuri mupombi. Nguva yemberi ichataura.